विरामीको देब्रे खुट्टा चिर्नुपर्नेमा नर्भिकका डाक्टरले चिरे दाहिने, लापरवाहीको नि हद हुन्छ नि ! – Online National Network
विरामीको देब्रे खुट्टा चिर्नुपर्नेमा नर्भिकका डाक्टरले चिरे दाहिने, लापरवाहीको नि हद हुन्छ नि !
१२ फाल्गुन २०७४, शनिबार १५:३४
अति संवेदनशरलि पेशाको रुपमा रहेको यो डाक्टरी पेशामा हुने सानो लापरवाहीले कसैको जीवन तथा घरपरिवार नै तहसनहस हुनसक्छ । यस्तै संवेदनशील कार्य भएका कारण नै यो पेशा अँगाल्नेलाई आम नागरिकले भगवान मानेका हुन् । हो प्रयास गर्दागर्दै भवितव्य आउने कुरालाई सजिलै स्वीकार गर्न सकिन्छ तर प्रयास नै गलत भैरहेको छ भने त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने ? भूलवुश हुन गएको भन्दै कहिलेसम्म अस्पताल प्रशासनसम्म धाउने विरामीका आफन्तले ? कहिले विरामीको पेटमै कैँची त कहिले कपडा, कहिले एउटा हातको अपरेशन गर्नुपर्नेमा अर्कै हातको अपरेशन । यस्ता घटनाहरु बारमबार दोहोरिरहेका छन् । त्यो पनि देशकै सुविधासम्पन्न कहिलएका अस्पताल तथा वरिष्ठ भनाउँदा चिकित्सकहरुबाट ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ८ की ३८ वर्षीया पौडेल लिगामेन्ट च्यातिएका कारण उपचार गर्न नर्भिक अस्पताल जानुभएको थियो । देब्रे खुट्टाको लिगामेन्ट च्यातिएर राम्रो उपचारका लागि भरतपुरबाट काठमाडौं आउनुभएकी पौडेलले डाक्टरको लापरवाहीका कारण दुःख पाउनु भएको छ । त्यति मात्रै होइन, एउटा खुट्टाको उपचार गराएर निको भएर फर्कने आशामा काठमाडौं आउनुभएकी उहाँलाई अब अर्को खुट्टको समेत उपचार गर्नु पर्ने भएको छ ।
खुट्टाको लिगामेन्ट अपरेशन सायद हतारमा गर्नुपर्ने अप्रेशन थिएन होला । अपरेशनको जिम्मेवारी लिएका डाक्टर पनि अपरेशन कक्षमा खासै हतारो देखाउनुपर्दैन होला ! आँखा चिम्लेर जहाँ पायो त्यही चिर्नुपर्ने । अपरेशन कक्षमा रहेको टीमले सल्लाह गरेर विरामीलाई ठूलो असर नपर्ने गरेर खतरामुक्त समयमा विरामीको अपरेशन गर्नुपर्ने नर्भिक अन्तराष्र्टिय अस्पतालका डाक्टरसाप प्रविण नेपालले भने कतिसम्मको लापरबाही देखाउनुभयो, विरामीको विमार नै मेसो नपाइ देब्रे खुट्टाको साटो दाइने खुट्टा चिर्नुभयो । अझ कतिसम्म व्यस्तता डाक्टरसापको भने विरामी समस्या लिएर एकैछिनमा भेटन जाँदा डा.साप त निस्किसक्नुभएको रहेछ ।
आफूले अपरेशन गरेको विरामीको अपरेशनपछि स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला भनेर उहाँ फलोअपको लागि पनि अस्पतालमा बस्नुपर्ने कि नाइँ ? चरम लापरवाही देखाएको छ नर्भिक अस्पताल र डा. प्रविण नेपालको ।
हाम्रो नीति नियम पनि अजिव छ । एउटा खुट्टाको अपरेशन गर्नुपर्ने ठाउँमा समस्या नै नदेखिएको खुट्टामा अप्रेशन गर्ने डाक्टरलाई अस्पतालले पनि सहजै छुटकारा दियो । यो घटनामा विरामीका आफन्तले अजीव व्यवहार देखाए । गम्भीर लापरवाही देखाएका डाक्टरलाई सम्झौतामा नै छाडे । त्यो पनि दुवै खुट्टाको उपचार निःशुल्क गर्ने सहमतिमा ।
जिम्मेवार संस्थाले गम्भीर लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई बर्खास्त गर्नुपथ्यो की नाइँ ? अनि अस्पताल प्रशासनले पनि लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई कारवाही गर्ने कि विरामीका आफन्तलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर घटनाको ढाकछोप गर्ने ? गम्भररि प्रश्न उब्जिएको छ । संवेदनशील पेशामा आवद्ध डाक्टरले विरामीको उपचारमा लापरवाही गर्दै जाने अनि विरामीको मृत्यु भएमा पनि त्यस्ता डाक्टरलाई छाडदै जाने हो भने नेपालको स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको विश्वास कहाँ पुग्छ ? कहिलेसम्म डाक्टरसापका मानवीय त्रुटिलाई सर्वसाधारणले सहँदै जाने ?